उद्योग निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरूका लागि चीन उच्च गुणस्तर मानक हाइड्रोलिक प्रणाली - हाइड्रोटेक
टाई रड हाइड्रोलिक
मानक हाइड्रोलिक प्रणाली
गैर-मानक हाइड्रोलिक प्रणाली
घर > उत्पादनहरू > हाइड्रोलिक प्रणाली > मानक हाइड्रोलिक प्रणाली
हाइड्रोलिक नियन्त्रण भल्भ
मानक टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक
मानकीकृत हाइड्रोलिक प्रणाली
कम चाप टाई रड हाइड्रोलिक सिलिन्डर
उद्योगको लागि मानक हाइड्रोलिक प्रणाली
हाइड्रोलिक प्रणालीको भूमिका दबाव परिवर्तन गरेर बल बढाउनु हो। पूर्ण हाइड्रोलिक प्रणालीमा पावर कम्पोनेन्ट, कार्यकारी कम्पोनेन्ट, कन्ट्रोल कम्पोनेन्ट, सहायक कम्पोनेन्ट (उपसाधन) र हाइड्रोलिक तेल गरी पाँच भागहरू हुन्छन्। हाइड्रोटेकले हाइड्रोलिक प्रणालीको उत्पादनलाई विशिष्ट कार्यसम्पादन आवश्यकताहरू (विशेष गरी गतिशील प्रदर्शन) पूरा गर्न उद्योगका लागि मानक हाइड्रोलिक प्रणाली प्रदान गर्दछ।
उद्योगको लागि मानक हाइड्रोलिक प्रणालीको 1. कार्य सिद्धान्त
हाइड्रोलिक ट्रान्समिशन एक प्रसारण विधि हो जसमा तरल पदार्थलाई काम गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र तरलको दबाब ऊर्जालाई आन्दोलन र बल महसुस गर्न प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया, हाइड्रोलिक कम्पोनेन्टहरूको संयोजन जसले एक निश्चित विशेष प्रकार्य हासिल गर्न सक्छ हाइड्रोलिक सर्किट भनिन्छ, र सम्पूर्ण जोडिएको वा धेरै विशिष्ट आधारभूत कार्यात्मक सर्किटहरू द्वारा कम्पाउन्ड गरिएकोलाई हाइड्रोलिक स्टेशन भनिन्छ। हाइड्रोलिक स्टेशन सामान्यतया हाइड्रोलिक कम्पोनेन्टहरू (पावर कम्पोनेन्ट, कार्यकारी कम्पोनेन्ट, कन्ट्रोल कम्पोनेन्ट, सहायक कम्पोनेन्टहरू) र काम गर्ने माध्यमबाट बनेको हुन्छ।
उद्योगको लागि मानक हाइड्रोलिक प्रणालीको लागि 1 इन्धन ट्याङ्की मानकीकृत, सानो, वजनमा हल्का र अन्तरिक्षमा सानो छ।
2. हाइड्रोलिक पम्पको नयाँ संरचनात्मक डिजाइन र कम आवाज छ।
3. हाइड्रोलिक पम्प एक चेक भल्भ संग सुसज्जित छ, त्यसैले त्यहाँ एक चेक भल्भ, बचत लागत र ठाउँ थप्न आवश्यक छैन।
4. हाइड्रोलिक पम्पमा राम्रो सटीक, संवेदनशील प्रतिक्रिया र प्रतिक्रिया विशेषताहरू छन्, र यसले भोल्टेज स्थिरीकरण पूरा गर्न 0.2-0.3 सेकेन्ड मात्र लिन्छ।
5. तेल सर्किट ब्लक स्थापना गर्न सजिलो छ। यो सीधा हाइड्रोलिक पम्प को तेल आउटलेट मा निश्चित छ, र सर्किट चयन विविध छ।
3. कामको दबाब
उद्योगका लागि हाम्रो कम्पनीको मानक हाइड्रोलिक प्रणालीमा धेरै फाइदाहरू छन्। उद्योगको लागि मानक हाइड्रोलिक प्रणालीमा दबाबको छनोट लोडको आकार र उपकरणको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। एसेम्बली स्पेस, आर्थिक अवस्था र एक्ट्युएटरको कम्पोनेन्ट आपूर्तिको अवरोधलाई पनि विचार गर्नुहोस्।
एक निश्चित लोड को मामला मा, काम को दबाव कम छ, र यो actuator को संरचनात्मक आकार बढाउन आवश्यक छ। केही उपकरणहरूको लागि, आकार सीमित हुनुपर्छ, जुन सामग्री खपतको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक छैन; यसको विपरित, दबाब धेरै उच्च छनोट गरिएको छ, पम्प, सिलिन्डर, भल्भ र अन्य कम्पोनेन्टहरूको सामग्री, सील, र निर्माण परिशुद्धता पनि धेरै माग छ, जसले अनिवार्य रूपमा उपकरण लागतहरू बढाउनेछ।
Q1: यदि मैले अर्डर गरे भने उत्पादन प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ?
A1: यदि उत्पादनहरू स्टक उपलब्ध छन् भने, तपाईंको भुक्तानी वा अग्रिम भुक्तानीको पुष्टिकरण पछि, हामी 3-7 दिनमा प्याक र डेलिभरी गर्नेछौं। यदि तपाईंले अन्तर्राष्ट्रिय पार्सल सेवा चयन गर्नुभयो भने, यो 3-7 दिनमा आइपुग्छ। यदि यो समुद्री ढुवानी द्वारा हो भने, यसले विभिन्न स्थानहरूमा निर्भर गर्दै 15-45 दिन लाग्नेछ।
Q2: भुक्तानी कसरी गर्ने?
A2: पहिले हामीलाई सोधपुछ पठाउनुहोस्, र हामी तपाईंलाई उद्धरणको जवाफ दिनेछौं, यदि हाम्रो मूल्य तपाईंलाई उपयुक्त छ भने, हामी हाम्रो बैंकिङ विवरणहरू सहित प्रोफार्मा इनभ्वाइस तयार गर्नेछौं।
Q3: निर्माण समय?
A3: कृपया हामीलाई स्टक अवस्थाको लागि सोधपुछ पठाउनुहोस्, यदि हामीसँग स्टक छैन, र यो हाम्रो मानक उत्पादनहरू हो (हाम्रो मोडेललाई सन्दर्भ गर्नुहोस्), यो 10-20 दिनमा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यदि यो अनुकूलित छ, हाम्रो मानक उत्पादनहरू होइन, उत्पादन गर्न 20-45 दिन लाग्नेछ।
1. 24 घण्टा अनलाइन सेवा;
2. एक वर्षको वारेन्टी, मर्मत र सम्पूर्ण जीवनको लागि सेवा।
3. प्रश्न रिपोर्ट 48 घण्टामा जवाफ दिइनेछ।
4. गुणस्तर ग्यारेन्टी।
हट ट्याग: उद्योग, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना, अनुकूलित, स्टक मा, चीन, मूल्य लागि मानक हाइड्रोलिक प्रणाली
सानो मानकीकृत हाइड्रोलिक प्रणाली
कृषिको लागि मानक हाइड्रोलिक प्रणाली
ठेगाना: नम्बर 880, टोंगान रोड, लाओशान जिल्ला, छिङदाओ
हाइड्रोटेक काममा फर्किएको छ
सरकारी स्वीकृति कागजातहरू अनुसार, हाइड्रोटेकले फेब्रुअरी 14 बाट ब्याचहरूमा काम र उत्पादन पुनः सुरु गर्नेछ। प्रत्येक कर्मचारीले घरमा तापक्रम मापन गर्दछ, र कम्पनीमा फर्कनु अघि तापक्रम 37.2 डिग्री भन्दा कम छ।
Hydrotechâ€””उच्च गुणस्तर हाइड्रोलिक सिलिन्डर आपूर्तिकर्ता
प्रतिलिपि अधिकार © 2021 Hydrotech Co., Ltd. - चाइना हाइड्रोलिक सिलिन्डर, हाइड्रोलिक भल्भ, हाइड्रोलिक प्रणाली निर्माताहरू सबै अधिकार सुरक्षित छन्।